Ihowuliseyili Pet ice cream indebe yoMvelisi kunye noMthengisi | ICopak
Kwi-COPAK, iCrystal icacile Iikomityi ze-ice cream zePET ziphuhlisiwe. Ikomityi nganye ine-flat okanye isiciko sedome. Ilogo enye ukuya kwithoba yemibala kunye neetekisi zinokuprintwa ngesicelo somthengi.
Iiplastiki ezilahlwayo Indebe ye-ice cream Izikhongozeli ze-sundae ziguquguqukayo, zihlala ixesha elide kwaye zichithakele ubungqina.
Ukucaca okuphezulu kwe Indebe ye-ice cream ibonelela ngokubonakala okuphezulu kwemveliso, ukwandisa isibheno kubathengi kunye nokuthengisa okungxamisekileyo. Ilungile kwivenkile ye-ayisi khrim, kwintengiso ye-deli, ipaki yolonwabo, ibala lezemidlalo, okanye indawo yemidlalo, ulungiselela imicimbi njalo njalo.
Elonaqondo lobushushu liphezulu lokuthwala Indebe ye-ice cream iimveliso ngama-70 ℃. Yiyo ke loo nto, lisetyenziswa jikelele kushishino ukupakishwa ukutya abandayo neziselo ezibandayo.
Ukutshatisa ikomityi, i-COPAK ibonelela ngeendlela ezineziciko ezicacileyo nezomeleleyo kunye neziciko zedome, nokuba zinemingxunya ejikelezileyo, enqindiweyo, okanye imingxunya enqamlezileyo yokusetyenziswa kweendiza ezahlukeneyo.
I-Eco-friendly, ayinaphunga, icace gca, intle kwaye iyahambelana neemfuno zokutya nezitya zeziselo.
1) Ukusetyenziswa: Thatha ikomityi yeplastiki yejusi, ubisi, ice cream, iyogathi, ukutya, isaladi kunye nezinye iimveliso.
2) Izinto: Ibanga lokutya Polyethylene terephthalate.
3) Ubukhulu: 5oz, 6oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz
4) Umthamo: Iikomityi ze-180ml-350ml, ivolumu eyahlukeneyo iyafumaneka.
5) Ukuprinta: 1-6 imibala eguqukayo yokuprinta kunye noshicilelo lweoffset ziyafumaneka.
6) Uyilo: Uyilo lwe logo yoMthengi lwamkelekile.
7) Ixesha lokuhambisa: iintsuku ezingama-20-25 zokusebenza ukusukela oko sifumana idiphozithi.
8) Isatifikethi: CE, FDA, SGS, ISO9001 okanye njengesicelo
9) Ixesha lokuhlawula: T / T. L / C. PayPal.
Uluhlu oluneenkcukacha lwePET ice cream
I-PET ICE CREAM CUP YOKUFUNDA
I-10Oz / 350ml
Egqithileyo Indebe yePlastiki yePlastiki eneZiciko
Okulandelayo: Iingubo zeNdebe yePET
Iikomityi zeplastiki ezineziciko